Saadaasha SKY SPORTS ee kulamada Premier League
Laurent Gbagbo’s go back introduced what it’s miles
investigations are underway
By axadle	 On Jan 15, 2021
Saadaasha Sky Sports ee kulamada usbuucan ee Premier League waa lasoo dusiyay waxayna saadaalineysaa natiijada safarka Manchester United ee Liverpool.
Ogeysiiska masiibada Liverpool
Manchester United ayaa la ciyaareysa Real
Jones Knows oo ah khabiir ku xeel dheer Sky Sports oo saadaaliya Premier League xilli ciyaareedkan ayaa shaaca ka qaaday in Frank Lampard uu ka qosli doono garoonka dhexdiisa isla markaana miisaanka u dhimi doono marka uu ciyaaro kulanka Fulham.
“Waa ciyaar weyn,” ayuu yiri, isagoo ula jeeda kulanka weyn ee horyaalka. Liverpool ayaa heysata garoonkeeda ugu fiican Premier League xilli ciyaareedkan, lagama badinin 67 kulan oo horyaalka ah oo ay ku ciyaareen Anfield, laakiin Manchester United ayaa sidoo kale heysata rikoorka ugu fiican ee martida. Marka, maxaa dhacaya marka laba shay oo dhaqaaq ah oo aan la dhaqaajin karin kulmaan? Way is dhinac fadhiyaan, sidaas ha noqoto. “
Jones Knows ayaa saadaaliyay in labada ciidan ee iska soo horjeedaa aysan dhaqaaqi karin, laakiin wuxuu ku adkeysanayaa in goolal la dhalin doono, taasoo hadii ay dhacdo guul ay gaarto Manchester United ay hogaanka ku sii hayn doonto.
Liverpool, haddii saadaashu run noqoto, waxay u dhici kartaa kaalinta afaraad ee kala sarreynta Premier League, iyadoo leh 34 dhibcood, halka Manchester City iyo Leicester City ay min hal dhibic yeelan doonaan iyagoo leh 35 dhibcood.
Xaalada Liverpool way ka sii dari kartaa waxayna ku dhici doontaa kaalinta shanaad ee kala sarreynta horyaalka markii la carqaladeeyo ciyaarta Everton haddii kooxda Carlo Ancelotti ay garaacdo Aston Villa.
Khabiirka Sky Sports Khabiirka Jones ayaa og saadaasha:
Wolves 1-0 West Brom
Leeds 2-2 Brighton
West Ham 0-1 Burnley
Sheffield United 0-1 Tottenham
Arsenal 0-1 Newcastle
axadle 8332 posts
Angola and the DRC fall on access
For Narcisse Mouelle, Cameroon’s Minister for